Home Wararka Gudaha Wararkii ugu dambeeyay Qodobo laga soo saray shirkii madaxweyne Xasan Sheekh iyo...
Wararkii ugu dambeeyay Qodobo laga soo saray shirkii madaxweyne Xasan Sheekh iyo madax goboleedyada
Waxaa lasoo gaba-gabeeyay shirkii ay magaalada Muqdisho ku lahaayeen Golaha Wada-tashiga Qaranka, kaasi oo laga soo saaray war-murtiyeed ka kooban dhowr qoddob.
Goluhu waxay ugu horeyntii u hambalyeeyeen Madaxweynaha la doortey ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud, waxayna Alle uga baryeen inuu waajibaadka qaran u fududeeyo. Goluhu wuxuu sidoo kale bogaadiyay sida dhaqsiyaha badan ee uu Madaxweynuhu isugu yeeray Golaha Wadatashiga Qaran taasoo ay ka muuqato rabitaan siyaasadeed iyo ka go’naansho dhab ah. Sidoo kale Goluhu waxay balanqaadeen inay si niyad-sami ku jirto ula shaqeynayaan Madaxweynaha.”
1-Qabyo-tir iyo dhamaystir wakhtiyaysan oo lagu dul-dhiso guulihii horay looga gaaray dib-u-eegista Dastuurka, noqdana mid ay u-wada- dhanyihiin dhammaan heerarka Dowladda iyo qaybaha bulshada.
3-Goluhu wuxuu isla-meeldhigay in la helo nidaam doorasho oo mideysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda.
4-Goluhu wuxuu si wadajir ah isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyey dowladnimadeena.
Previous articleEthiopia ayaa doonaysa inay dib u Bilawdo
Next articleMuxuu yahay ujeedka kulanka uu caawa Xasan Sheekh ugu yeeray xildhibaanada?
Maxay yihiin wax yaabaha hortabinta u leh Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xamse?